Ibhukwana Lomsebenzisi we-AirTies Air 4920 Smart Mesh - Ama-Manual +
Ikhaya » Ama-AirTies » Ibhukwana Lomsebenzisi we-AirTies Air 4920 Smart Mesh
Ibhukwana Lomsebenzisi we-AirTies Air 4920 Smart Mesh
April 26, 2018 April 27, 2018 10 Amazwana ku-AirTies Air 4920 Smart Mesh Manual Manual
1 Ibhukwana Lomsebenzisi we-AirTies Air 4920 Smart Mesh
1.1 Igayidi Yokufaka Ngokushesha
1.1.1 Amabhukwana / Izinsiza Ezihlobene
Igayidi Yokufaka Ngokushesha
UKUHLELEKA KULULA: IPHUZU LOKUFINYELELA
1. Beka i-Air 4920 eyodwa eduze komzila wakho bese uxhuma laba ababili usebenzisa i-Ethernet ebiyelwe
ikhebula (ipulaki eliphuzi).
2. Xhuma idivayisi ye-Air 4920 kuma-mains bese ucindezela inkinobho yamandla.
3. Linda kuze kube yilapho omabili ama-5 GHz kanye no-2.4 GHz ama-LED eluhlaza okuqinile Lokhu kungathatha imizuzu engafika kwemithathu.
4. Manje, ungaxhuma amadivayisi eselula kunethiwekhi yakho entsha engenantambo.Igama le-network okuzenzakalelayo nephasiwedi zifakwe ilebula ezansi kwedivayisi.
- Kwiklayenti ngalinye (isib. I-laptop, ifoni noma ithebhulethi),
xhuma kunethiwekhi ekulebuli.
- Faka iphasiwedi yenethiwekhi lapho utshelwa.
5. (Ngokuzithandela) Ungashintsha igama lenethiwekhi (i-SSID) nephasiwedi yenethiwekhi yakho.
Xhuma kunethiwekhi yakho, uvule ifayela le- web bese uthayipha “http: //air4920.local” kufayela le-
ibha yekheli. Ngena ngemvume bese uzulazulela ku-QUICK SETUP kusuka kufasitelana langakwesobunxele. (Iphasiwedi yokungena emisiwe ayinalutho.)
Nweba ISIVIVINYO SAKHO SE-WiFi (MESH):
Ukulungiselela: Ukuxhuma i-Air 4920 entsha
1. Egumbini lapho i-router itholakala khona, beka i-Air 4920 entsha ebangeni elingaba mathathu
amamitha ukusuka kudivayisi ekhona ye-Air 4920, uyixhume kuma-mains bese ulinda kuze kube yilapho zombili i-5 GHz kanye ne-2.4 GHz LED zikhanya ziluhlaza (imizuzwana emi-4 KUVULIWE, imizuzwana engu-4 IVALIWE). Lokhu kungathatha imizuzu engafika kwemithathu.
2. 2.a Cindezela inkinobho ye-WPS kwi-Air 4920 ekhona (eduze kwerutha) imizuzwana emi-2 kanye ne-
bese ku-Air 4920 entsha imizuzwana emi-2 (2.b).
Ama-5 GHz nama-2.4 GHz ama-LED qala ukukhanyisa futhi amadivayisi axhuma ngokuzenzakalela. Le nqubo ingathatha imizuzu emihlanu. Ukuxhumeka sekusungulwe kanye lapho Ama-LED akhanyisa okuluhlaza (I-5 GHz LED izocisha okwesikhashana kanye njalo ngemizuzwana emi-5).
Siyakuhalalisela, uyilungiselele ngempumelelo idivayisi yakho entsha. Imininingwane yakho yenethiwekhi ekhona ye-Air 4920 ihlelwa ngokuzenzakalela ku-Air 4920 yakho entsha.
Qaphela: Uma i-5GHz LED kudivayisi entsha ingakhanyisi okuluhlaza kungakapheli imizuzu emihlanu,
ngicela uphinde isinyathelo 2.
Ukusetha i-Air 4920 egumbini olithandayo
3. I-Air 4920 entsha manje ingasakhishwa futhi ifakwe egumbini olithandayo.
Ukuxhumeka kuzosungulwa ngokuzenzakalela. Le nqubo izothatha imizuzu emithathu.
Qaphela: Uma i-5 GHz LED ingakhanyisi okuluhlaza (I-5 GHz LED izocisha kafushane kanye kuzo zonke
Imizuzwana emi-5) kungakapheli imizuzu emithathu, sicela ubheke isahluko «Ukuxazulula inkinga» (ikhasi 5).
4. (Okokuzithandela) Manje, ungaxhuma amadivayisi anentambo (kule example, i-Set-Top Box) ku-Air 4920 kusetshenziswa ikhebula le-ethernet (ipulagi eliphuzi).
5. (Ngokuzithandela) Ungangeza ama-Air 4920s angeziwe kunethiwekhi yakho ngokuphinda izinyathelo ezisuka ku-1.
Ukwenza ngcono ukumbozwa okungenantambo
Uma ungathanda ukuthuthukisa ukufakwa okungenantambo kwelinye igumbi, ungasetha i-Air 4920 eyengeziwe. Futhi ungaxhuma amadivayisi nge-Ethernet kule Air 4920 (isib.ample STB, ikhompiyutha noma ikhonsoli yomdlalo).
Uma indawo ofuna ukuyifaka ikude kakhulu ne-Air 4920 yakho ekhona, ungafaka ama-Air 4920s angeziwe ukufinyelela lapho.
AMACEBISO OKUSEBENZA KAKHULU:
- Vala isevisi engenantambo kumodemu yakho.
- Gcina amayunithi kude:
- Imithombo engaba khona yokuphazamiseka kukagesi. Izisetshenziswa ezingadala ukuphazamiseka zibandakanya abalandeli bophahla, amasistimu okuphepha ekhaya, ama-microwave, ama-PC, nezingcingo ezingenantambo (ihendisethi nesisekelo).
- Izindawo ezinkulu zensimbi nezinto. Izinto ezinkulu nezindawo ezibanzi ezifana nengilazi, izindonga ezifakiwe, amathangi ezinhlanzi, izibuko, izitini nezindonga zikakhonkolo nakho kunganciphisa amasignali angenantambo.
- Imithombo kanye nezindawo zokushisa njengamahhavini namakamelo elanga kanye nokukhanya kwelanga okuqondile noma ngabe kunomoya omuhle.
- Futhi, kunconywa kakhulu ukuthi amandla kagesi angenakuphazanyiswa (ama-UPSes) (noma, okungenani, ama-surge protectors) asetshenziselwa ukuvikela ama-Air 4920s namanye amadivayisi kagesi (amamodemu we-VDSL, ama-routers / amasango, amabhokisi we-set-top, ama-TV, njll. ) ezingozini zikagesi. Iziphepho zikagesi, voltagAma-surges nezinye izingozi ezihambisana negridi yamandla kagesi kungadala umonakalo omkhulu kumadivayisi kagesi. Ngokungeziwe, noma ukuphazanyiswa kwamandla kagesi ngomzuzwana owodwa kungenzeka ukuthi kubangele wonke ama-modem, amaklayenti angenantambo, ama-TV, ama-set-top box, njll. Ukuthi anikwe amandla noma asethwe kabusha. Noma imishini iqala ngokuzenzakalela, kuzothatha imizuzu embalwa ngaphambi kokuthi zonke izinhlelo zibuyele ku-inthanethi futhi zikuvumele ukuthi uthokozele izinsizakalo zakho ezenzelwe i-Intanethi.
- Ukubuyela kuzilungiselelo zefektri:
Ukubuyisela iyunithi kuzilungiselelo zefektri, cindezela phansi kunkinobho yokusetha kabusha (ekuvulekeni okuncane ngemuva) amasekhondi ayi-10. I-paperclip yensimbi (enethiphu enwetshiwe) noma i-toothpick eqinile ngokuvamile ukukhetha okuhle kwalo msebenzi. Lapho inqubo yokusetha kabusha iqalwa, ama-LED angaphambili "azocwazimula" okwesikhashana bese iyunithi lizoqala kabusha (cishe emizuzwini emi-3) kuzilungiselelo zefekthri.
- Uma wenza ngezifiso izilungiselelo zenethiwekhi, sicela uzirekhode lapha:
Igama lenethiwekhi: ……………………………………………………………………
Iphasiwedi Yenethiwekhi: ………………………………………………………………
Iphasiwedi Yokuxhumana Komsebenzisi: ……………………………………………
Lo mkhiqizo usebenzisa isoftware eyenziwe ngumthombo ovulekile womphakathi. Noma iyiphi isoftware enjalo inelayisensi ngaphansi kwemigomo ethile yelayisense esebenza kuleyo software ethile (njenge-GPL, i-LGPL njll). Imininingwane enemininingwane mayelana namalayisense asebenzayo nemibandela yelayisense ingatholakala kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi wedivayisi. Ngokusebenzisa lo mkhiqizo, uyavuma ukuthi usebenzise kabushaviewyahlela leyo migomo yelayisense nokuthi uyavuma ukuboshwa yiyo. Lapho leyo migomo ikunikeza kwikhodi yomthombo yale software eshiwo, leyo khodi yomthombo izotholakala ngezindleko uma icelwa kuma-AirTies. Ukuthola ikhophi yale khodi yomthombo, sicela uthumele isicelo sakho ngokubhala nge-imeyili ku [i-imeyili ivikelwe] noma ngeposi lomnenke ku: AirTies Wireless Communications Gulbahar Mah. U-Avni Dilligil Sok. Cha: 5 Celik Is Merkezi, Mecidiyeköy, 34394 ISTANBUL / Turkey AirTies bazokuthumelela i-CD enekhodi yomthombo eceliwe engu- $ 9,99 kanye nezindleko zokuthumela. Ngemininingwane sicela uxhumane [i-imeyili ivikelwe]
Amabhukwana / Izinsiza Ezihlobene
Ibhukwana Lomsebenzisi Lokuxhumana Nge-Bluetooth Mesh
Ibhukwana Lomsebenzisi Wokuxhumana Nge-Bluetooth Mesh - I-Optimised PDF i-Bluetooth Mesh Networking User Manual - I-Original PDF
SHARP Air Conditioner Umsebenzisi Manual
Ibhukwana Lomsebenzisi weGelius AIR TWS Headset
I-Gelius AIR TWS Imanuwali yomsebenzisi wama-Headset we-Gelius AIR TWS Imanuwali yomsebenzisi yama-headphone - I-PDF Elungiselelwe I-Gelius AIR TWS...
Incwadi Yomsebenzisi We-Hisense Air Conditioning
I-Hisense Air Conditioning System User Manual service-handleiding-hisense-new-comfort-wandmodel-Kwenzelwe
April 26, 2018 April 27, 2018 Posted inAma-AirTiesTags: Air 4920, Ama-AirTies, incwadi yomsebenzisi
i-air4920.local [Ukungena Ngemizila]
Novemba 16, 2018 ku-12: 51 am
Angikwazi ukuthola iphasiwedi ukungena ngemvume ku-extender, njengoba kushiwo kumanuwali iphasiwedi ingubo, ngizama lokhu futhi angikutholanga ukufinyelela, futhi ngafuna i-password ezenzakalelayo engingayitholi iphakethe le- noma ku-extender uqobo.
Apreli 15, 2020 at 6: 54 pm
inkinobho yami yokuphumula iphuliwe ngakho-ke ngingayiphumula kanjani ngaphandle kwenkinobho? ……
futhi akekho ozofika azokulungisa ekhaya…
Meyi 20, 2021 at 3: 18 am
Ungasetha kabusha ngokugcina ucindezele inkinobho ye-WPS imizuzwana eyi-10
UMary Buckman uthi:
Juni 25, 2020 ku-7: 54 am
ngeke ngiphinde ngithenge lezi! zilungile uma zisebenza kahle, kepha lapho phansi akekho ongafonela usizo ngizamile ukushayela zonke izinombolo engingazithola
Okthoba 16, 2020 ku-6: 29 pm
Ngabe i-AirTies 4920 extender ingasebenza kwinethiwekhi enezikhala nge-AirTies 4921 extender?
UKelvin Miller uthi:
Novemba 22, 2020 ku-4: 16 am
Nginezingxenye ezimbili zezindiza. Izitebhisi ezizodwa kanye neyunithi enkulu exhunywe kwizitebhisi zemodem ezansi. Ngineliphezulu phezulu eceleni kwekhekhe lami lomlilo kodwa ikhubhu lizoxhumeka kuphela ezitebhisini ezansi. Kubukeka sengathi izinto eziningana ngendawo zixhuma ezitebhisini ezansi esikhundleni sezitebhisi ezilodwa. Ingabe ikhona indlela yokuphoqa lezi zinto ukuthi zixhumane neyunithi yokuvala?
U-Andy Mulchek uthi:
Disemba 1, 2020 ku-4: 02 pm
Angixhasi, kepha ukuqonda kwami ​​ukuthi iyunithi exhunywe kwimodemu isungula inethiwekhi, futhi izosetshenziswa kuyo yonke indlu. Amayunithi angeziwe azothuthukisa isignali, futhi anwebe inethiwekhi esungulwe kusuka kuyunithi yokuqala. Ngakho-ke, uxhuma kunethiwekhi esungulwe kusuka kuyunithi yokuqala, futhi iyunithi eyengeziwe ikwenyusela isignali.
Agasti 24, 2021 at 8: 05 pm
Iyini iphini le-WPS le-AirTies Air 4920
Septemba 11, 2021 ku-5: 34 pm
Angiyena umphathi waleli bhodi. Yilokhu engikufundile namuhla. Kwaphela iminyaka emibili ngisebenzisa ngempumelelo amayunithi ama-AirTies 4920 amabili, engangiyithengile njengephakethe elikabili (ngakho bobabili babenegama ne-password efanayo ye-wifi). Ukufakwa koqobo kwakulula.
Namuhla ngingeze uphiko lwesithathu lwama-4920. Ngaphambi kokuthi ngiqale, amayunithi amabili okuqala ayesebenza (inkinobho ye-5 GHz yagcwala njalo ngemizuzwana emi-5). Kukhompuyutha yami ephathekayo, ngibone isibonelo esisodwa salelo gama le-wifi elisethwe kufekthri, futhi ngingaxhuma kulo ngaphandle kwentambo ngisebenzisa iphasiwedi esethwe yifektri. Ngingaxhuma futhi kunoma iyiphi iyunithi ngisebenzisa ikhebula le-ethernet.
Ngalesi sikhathi ikhompyutha yami ibingabona neyunithi yesithathu enikwe amandla kuhlu lwayo lwenethiwekhi ye-wifi, kepha angikwazanga ukuxhuma kuyo ngisebenzisa igama ne-password yayo ehlukile esekwe embonini. I-BTW, ngesinye isikhathi, ngiwabeka kabusha wonke amayunithi amathathu kumasethingi efektri yabo ngisebenzisa isiqeshana sephepha emgodini we-Setha kabusha imbobo eduze kwentambo yamandla, kepha lokho bekudingeka kuphela kuyunithi yesithathu engiyithengile “esetshenziswe ngobumnene”.
Iyunithi engu-4920 exhunywe ngekhebula le-ethernet ku-router, iyinhloko. Ukwengeza iyunithi yesithathu, ngiyinike amandla cishe ngamamitha ama-5 ukusuka kwiyunithi eyinhloko. Ayikho ikhebuli ye-ethernet enamathiselwe kwiyunithi yesithathu. Ngicindezele imizuzwana emi-2 inkinobho ye-WPS kwiyunithi eyinhloko. Ngibe sengicindezela kwiyunithi yesithathu inkinobho ye-WPS imizuzwana emi-2. Ngilinde imizuzu engu-3-5, futhi inkinobho yamayunithi womabili we-5 GHz yaqala ukubenyezela njalo ngemizuzwana emi-5 (iyunithi yesithathu yathatha isikhathi eside). Ngaleso sikhathi, manje njengoba kuvulwe amayunithi amathathu, ikhompyutha yami yabona kuphela igama le-wifi le-master unit (elixhunywe ngocingo ku-router).
Kusetshenziswa umphathi we-router yami web ikhasi, bengibona ukuthi i-router ibibona wonke amayunithi amathathu (ngalinye linekheli le-IP elihlukile). Ngisebenzisa ikheli le-MAC eliboniswe ekhasini lomlawuli we-router futhi ezansi kweyunithi eyinhloko, ngithole ikheli le-IP leyunithi eyinhloko. Ngemuva kwalokho kukhompyutha yami ephathekayo, ngafaka lelo kheli le-IP kuthebhu entsha yesiphequluli, futhi lokho kwangivumela ukuthi ngiguqule igama ne-password ye-wifi. Usuqedile (ungazami ukushintsha igama le-wifi nephasiwedi kwamanye amayunithi amabili).
Manje, ngabo bobathathu abasebenzayo, sengikwazi ukuhambahamba namadivayisi wami weselula futhi baxhumeka ngokuzenzakalela kuyunithi enesiginali enamandla kunayo yonke. Kupholile kakhulu futhi kuyasiza. Ngifisa sengathi ngabe ngikwenzile lokhu eminyakeni emibili eyedlule.
Ngigcine i-wifi ye-router ivuliwe. Kimi angiboni ukuphazanyiswa kuyo, ngakho-ke ngiyigcina njengemuva, uma kungenzeka ngibuyele emuva ku-wifi ye-router. I-BTW, esimweni sami, isignali ye-wifi evela kuwo womabili amayunithi inamandla kakhulu kune-router, futhi isivinini esingenantambo siphindwe kabili ukushesha, phezulu naphansi.
January 14, 2022 at 2: 28 am
Ingabe kungenzeka ukusebenzisa lolu bubanzi be-extender ngerutha yenkampani yangaphandle? Ngidinga ukwazi ukuthi iyini iphinikhodi ye-WPS ingabe ukhona owaziyo?
Gcina igama lami, i-imeyili, ne webindawo kulesi siphequluli ngokuzayo lapho ngiphawula.
I-AJAX 8706 Keypad Wireless Touch Keyboard Manual
I-Meizhou Hongfeng Arts Crafts 266285 BJ 57IN Indoda Yeqhwa Ene-Snowflakes Incwadi Yokufundisa
I-AJAX 7661 StreetSiren Wireless Outdoor Siren User Manual
I-AJAX 17938 12V PSU yeHub/Hub Plus/ReX Power Supply Unit Manual
I-AJAX 10306 Transmitter Efakwe Intambo Kumtshina Ongenantambo Imanuwali Yomsebenzisi
UMARKO L PETERKA on I-ZERFUN G8 Pro Wireless Microphone System Incwadi Yomsebenzisi
Kurt on I-Heater Infrared Heater AH-200/300/800 Ibhukwana Lomsebenzisi
2017 Toyota Camry Hybrid LE Fuse Ibhokisi Imidwebo on Umdwebo webhokisi leToyota Camry Passenger Fuse
2017 Mitsubishi Lancer 4WD Fuse Box Imidwebo on UMdwebo weMitsubishi Lancer Passenger ne-Engine Fuse Box
K Townsend on Mira Ukuthembeka ERD Bar Valve nokufakwa Manual Umsebenzisi